चुकंदर बीउ: को यूराल र मास्को क्षेत्र मा सर्वश्रेष्ठ आउटडोर प्रजातिहरू
हामी बीट बारेमा बताउनुहोस्। यो तरकारी बाइजान्टियम देखि 10 औं शताब्दीमा रूस ल्याइएको थियो। उहाँले सफलतापूर्वक नयाँ मुलुकका मूल लिएको र गाई लागि मानिसहरूलाई खाना, साथै चारा रूपमा प्रयोग गर्न थाले छ। पछि यसलाई देखि चीनी उत्पादन सिके। हरेक माली कम्तिमा एक पटक चुकंदर बीउ किनेको। सबै भन्दा राम्रो आउटडोर प्रजातिहरू प्रारम्भिक, मध्य-सिजन र लेट विभाजित छन्।
प्रारम्भिक प्रकार रस को निर्माण मा, कच्चा फारम प्रयोग गरिन्छ। मध्य-ग्रेड खाना पकाउन र लागि प्रयोग गरिन्छ समर्थित तरकारी। लेट संकर जाडो भण्डारणको लागि राम्रो हो।
राम्रो अंकुरण, छैन चुकंदर सबै बीउ दिनुहोस्। सबै भन्दा राम्रो आउटडोर प्रजातिहरू कारण वास्तवमा भन्ने अधिकतम उपज लागि लोकप्रिय छन्।
प्रारम्भिक चुकंदर प्रजातिहरू बाहिर लागि
प्रारम्भिक प्रकार 50-80 दिनमा परिपक्व। कहिलेकाहीं यो अवधि 100 दिन वृद्धि गरिएको छ। एक चुकंदर गर्मी को बीचमा हुन सक्छ खान्छन्। एकै समयमा बेफाइदा को एक नम्बर छन्:
छोटो बढ्दै सिजन;
अपेक्षाकृत कम रूपमा लेट प्रजातिहरू गर्न तुलनामा संरचना मा चीनी।
यस प्रकारका फल को जाडो लागि छोड्ने छैन राम्रो छ। तिनीहरूले छ गुणवत्ता राखन कम छ। छोटो मा वनस्पति को अवधि जरा छैन धेरै चिनी जम्मा गर्न समय छ। तिनीहरूले लेट प्रजातिहरू को स्वाद गर्न केहि कमसल छन् किन कि छ। एकै समयमा, तिनीहरूले गर्मी र प्रारम्भिक शरद ऋतु भर प्रयोगको लागि उपयुक्त हो।
सबै भन्दा राम्रो प्रारम्भिक प्रजातिहरू छन्: Odnorostkovaya, रातो बल, को Libero, Vinegretnaya Marmeladka।
विविधता पाब्लो मध्य-प्रकार पर्छ।
लगभग 110 दिनमा परिपक्व। स्वाद गुणस्तर क्रप प्रारम्भिक प्रजातिहरू भन्दा उच्च छ। जाडो भण्डारण दिनुभयो। अनुभव माली आफ्नो बिरुवा रोपे। यो अक्सर किनभने त्यहाँ मूल सिस्टम बिगार्न एक जोखिम छ जमीन मा स्थानान्तरण समयमा, शुरुआती लागि समस्यामा गर्दछ। तर तपाईं अग्रिम बीउ अङ्कुराउन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि बोट को माटो मा लगाए।
बीचमा-चुकंदर प्रजाति को सबैभन्दा लोकप्रिय प्रतिनिधिको: डेट्रोइट, borsch, अतुलनीय एक 463।
आफ्नो क्षेत्रमा कुनै पनि प्रारम्भिक frosts छन् भने, तपाईं खुला जमीन मा यस्तो बाली रोपेर स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। बढ्दै सिजन तिनीहरूले सबैभन्दा लामो छ र कहिले काँही 135 दिन पुग्छ। यो समय समयमा जरा उपयोगी पदार्थ धेरै जम्मा गर्न समय छ। स्वाद मा अन्य प्रजाति कुनै पनि तुलना गर्न तिनीहरूलाई संग छैन।
सकरखण्ड यसको छ महिना लागि सबै गुणहरू पनि कायम रहन्छ। सर्वश्रेष्ठ प्रजातिहरू: सिलेंडर, Renova, Odnorostkovaya।
बीट बीउ - सबै भन्दा राम्रो आउटडोर प्रजातिहरू, समीक्षा, विनिर्देशों
यो चुकंदर बीउ कसरी किन्ने सिक्न समीक्षा माली ध्यान आवश्यक छ। सबै भन्दा राम्रो आउटडोर प्रजातिहरू इष्टतम प्रदर्शन र tubers उत्पादन। यो उपस्थिति र स्वाद दुवै लागू हुन्छ।
किसान देखि सबैभन्दा ठूलो प्रशंसा को पुराना प्रकार बीच पाब्लो ग्रेड दिनुपर्छ। यो यस्तो चुकंदर को मूल मा चिकना र धेरै स्वादिष्ट कि विश्वास छ। तिनीहरूले मध्यम आकारका छन्। शरीर गाढा रातो, मीठो छ।
चुकंदर कार्य - अर्को लोकप्रिय किसिम। शरीरका अंगूठियहरुको deprived छ। हामी थाह छ, तिनीहरूले rigidity दिन र palatability कम। हाइब्रिड precocious र अविश्वसनीय फलदायी। मूल तरकारी पूर्ण राखिन्छ।
चुकंदर बीउ बीचमा अर्को बिक्री नेता - विभिन्न रोण्डो। गर्मी मान्छे यसको सादगी को लागि यो प्रेम। यो संस्कृति पर्नसक्ने प्रभाव गर्न बिल्कुल indifferent छ कि जस्तो लाग्न सक्छ। कुनै पनि क्षण हाम्रो देशमा चिसो धमकना सक्नुहुन्छ किनभने यो गुण, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अपेक्षाकृत माटो तरकारी पनि undemanding छन्। भने हाइब्रिड, अघिल्लो जस्तो, सबै सम्भव रोगहरु गर्न विरोध छ।
तिनीहरूले वस्तुतः कुनै पनि वातावरण मा अधिकतम उपज दिन किनभने सर्वश्रेष्ठ जो बीच अन्तिम दुई प्रजाति छन् खुला जमीन लागि चुकंदर को प्रजातिहरू, राम्रो हो। मूल पूर्ण संरक्षित।
तरकारी बाली सबैभन्दा unpretentious बीच बीट छन्। खुला जमीन लागि सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू सामान्यतया हाम्रो देश को अस्थिर मौसम अवस्था राम्रो अनुकूल। तर केही अवस्थामा, परिणाम छैन सम्पूर्ण सफल छ। समस्या कसरी जोगिन?
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तरकारी रुचि छैन कसरी अम्लीय वा alkaline माटो। यी अवस्थामा उतरने पछि, उहाँले चाँडै बढ्दै रोकियो।
माटो अम्लीय छ भन्ने कसरी थाहा छ? horsetail वा कुम्मैत को यो मा उपस्थिति - यो प्रत्यक्ष प्रमाण। तर निराश छैन! बस प्रति काठ खरानी वा कागती svezhegashenoy एक किलोग्राम को वर्ग मीटर षड्यन्त्र बनाउन रोपण पहिले।
रसिद कागती जस्तै बोरोनकोअर्थ जस्ता दुर्लभ बोट micronutrients, प्रदान गर्दछ। चुकंदर यसको कमी संवेदनशील छ।
सामान्य मा, संस्कृति को उपस्थिति हामीलाई धेरै बताउन सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं पात राता हेर्न भने, यो मैंगनीज र म्याग्नेसियम को कमी देखाउँछ। यदि माटो समावेश सानो फलाम chlorosis उल्लेख गरेको छ। युवा मार यो रोग मा पहेंलो छन्।
उपनगरहरुमा लागि सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू रोज्न
हामी उपनगर लागि चुकंदर को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू सूची। जमीन खुला एक होसियार दृष्टिकोण आवश्यक छ। भने क्षेत्रमा सफलतापूर्वक जस्तै प्रजातिहरू हुर्किसकेका:
यी सबै प्रारम्भिक प्रजातिहरू।
मास्को बासिन्दा पनि अक्सर हुर्किसकेका मध्य-संकर:
देर प्रजातिहरू बीचमा पनि उपनगर लागि चुकंदर को सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू छन्। निम्न बाली को अवतरण लागि प्रयोग जमीन खुला:
चुकंदर बीउ - को यूराल मा सर्वश्रेष्ठ आउटडोर प्रजातिहरू (सूची)
यूराल soils विशिष्ट विशेषताहरु अधिकार। किन विशेषज्ञहरु मात्र केही प्रजातिहरू रोपेर छ सिफारिस कि छ। यो अधिकतम उपज सुनिश्चित गर्नेछ।
क्रिमसन बल। एक बीट को नयाँ प्रकार को। मध्य-संकर। मूल तरकारी एक गोलाकार आकृति छ। पल्प रसदार र स्वादिष्ट छ, र एक Saturated रंग छ।
Albina Veroduna। सेतो किसिम। यो विशेष गरी पश्चिमी युरोप मा लोकप्रिय छ। प्लान्ट पनि मानव खपत लागि उपयुक्त छ। तथापि, यो पूर्व-जोश छ। Palatability उच्च।
Bikores। एक सपाट आकार द्वारा विशेषता। मध्य-ग्रेड। मूल तरकारी - बुरगुण्डी रंग। यो कुनै छल्ले समावेश, चीनी मज्जा छ।
बीट को बीउ कसरी रोपेर गर्न?
आज पसलहरु वर्तमान चुकंदर बीउ को एक विस्तृत दायरामा मा। बाहिर लागि सबै भन्दा राम्रो प्रजातिहरू, पनि, तिनीहरूमध्ये छ। यो तपाईं उच्च स्वाद संग तरकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै संकर गर्न प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
तथापि, बीउ चयन गर्न पर्याप्त छैन। तिनीहरूले गर्न साथै राख्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा मुख्य कदम बेड तयार छ। खन्नुहोस् र माटो खुकुलो पार्नु निश्चित हुनुहोस्। जमीन नरम हुनुपर्छ। बीउ प्रारम्भिक मई मा छरिएको छन्। समय द्वारा जमीन ठीक माथि न्यानो समय छ। साथै, हामी बिर्सन हुँदैन तापमान खस्छ राती। बीट यो सहनु छैन।
बीउ अक्सर सानो गांठ मा चिपके र साथ धेरै मार उत्पादन सक्षम छौं। तपाईं यस्तो सामाग्री सामना भने पछि छ राम्ररी यसलाई decimate।
कटा बीउ, पनि, कहिलेकाहीं बजार पाउन सकिन्छ।
बीउ बढी तीव्र उद्भव चाहनुहुन्छ? पानी केही दिनको लागि तिनीहरूलाई भिजेको र cheesecloth मा र्याप। यसलाई अग्रिम पोषक तत्व समाधान, पसलहरुमा बेचिएको मा भिजेको राम्रो छ। तपाईँले सेतो सुझाव को सतह मा नोटिस रूपमा, बिस्तारै खुला जमीन तिनीहरूलाई ड्रप।
तयार बेड मा यो उद्देश्य लागि सानो grooves गर्छन्। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य देखि6सेन्टीमिटरको दूरी थिए भनेर बीउ तिनीहरूलाई राख्नु।
ल्याण्डिङ को समयमा बीउ germinated थिए भने खातिका, moisturize गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो धन्यवाद जीवाणुहरू को सुकाउने अप समाप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
महत्त्वपूर्ण कवरेज। यो सबै भन्दा राम्रो छ, यो साइट मा furrows समयमा दक्षिण बाट उत्तर गर्न निर्देशन चयन गर्न सिफारिस गरिएको छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि व्यापक aisles गर्नु पर्छ।
पछि मार पहिलो तीन पात देखा यसलाई सञ्चालन गरिएको छ। यदि यो गरेको छैन, तपाईं एउटा सानो मूल तरकारी प्राप्त। तिनीहरूले बिस्तारै बढ्न जारी हुनेछ। पटक-पटक Thinning दुई हप्तापछि आवश्यक छ।
पहिलो पटक यो उद्भव पछि बाहिर छ। जसमा पूर्व-भंग मल पानी लिन। त्यो संस्कृति पानी हाले।
Foliar आवेदन राम्रो सिद्ध छ। तर चुकंदर nitrates जम्मा कि भूल छैन। यी पदार्थ नाइट्रोजन मल को अत्यधिक भर्ना मा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ।
को प्राइमर पोटासियम र फस्फोरस को पर्याप्त हुनु पर्छ।3को कुल सक्रिय वृद्धि अवधि भर बाहिर, रुचाउने आवश्यक छ। यो धेरै नाइट्रोजन समावेश रूपमा मल, छैन सिफारिस गरिएको छ। मल अगस्ट को शुरू संग रोकियो।
हाम्रो भान्सा मा सबै भन्दा लोकप्रिय तरकारी बीच बीट छ। सबै भन्दा राम्रो आउटडोर प्रजातिहरू, छोटो र ठूलो fruited, अरू सबै विशेषताहरु मा उच्च हो।
के तपाईंले कहिल्यै बीउ गुणस्तर महत्त्वपूर्ण छ के सोचेको? त्यसपछि यो तपाईं अनुभव माली को घमण्ड गर्न सक्ने परिणाम हासिल गर्न सक्षम हुनेछ असम्भाव्य छ।
यस लेखमा सल्लाह सुन्न र केवल सबै भन्दा राम्रो ग्रेड किन्न!
Multivarka3सरल वसन्त नुस्खा मा तरकारी सूप